ဝဘ်ဆိုဒ်၊ အီလက်ထရွန်းနစ်၊ သို့မဟုတ် အပလီကေးရှင်း အရောင်အသွေး အစီအစဉ်များ ဖန်တီးနည်း | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 15, 2021 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 15, 2021 Douglas Karr
အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အရောင်၏အရေးပါမှုဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးအချို့ကို မျှဝေထားပါသည်။ ဝဘ်ဆိုက်၊ အီလက်ထရွန်းနစ်ဆိုက် သို့မဟုတ် မိုဘိုင်း သို့မဟုတ် ဝဘ်အက်ပလီကေးရှင်းအတွက်၊ ၎င်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ အရောင်များသည်-
အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုနှင့် ၎င်း၏တန်ဖိုးကို ကနဦးတွင် အထင်အမြင်သေးခြင်း - ဥပမာ၊ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများသည် အနက်ရောင်၊ အနီရောင်တို့ကို အသုံးချတတ်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ဆိုလိုသည်။
ဝယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်များ - အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု၏ယုံကြည်မှုကို အရောင်ခြားနားမှုဖြင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ပျော့ပျောင်းသောအရောင်အသွေးအစီအစဥ်များသည် မိန်းမဆန်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရမှုပိုရှိနိုင်သည်၊ ကြမ်းတမ်းသောဆန့်ကျင်ဘက်များသည် ပို၍အရေးတကြီးဖြစ်ပြီး လျှော့စျေးဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်သည်။
အသုံးဝင်မှုနှင့် အသုံးပြုသူ အတွေ့အကြုံ- အရောင်တွေမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရှိတယ်။ နှင့် ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများလည်း ရှိသောကြောင့် အသုံးပြုသူ အင်တာဖေ့စ်ကို သွားလာရန် ပိုမိုလွယ်ကူ သို့မဟုတ် ပိုမိုခက်ခဲစေသည်။
85% သောလူများက ထိုအရောင်သည် သူတို့ဝယ်သည့်အရာအပေါ် လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ဟု ဆိုကြသည်။
အရောင်များသည် အမှတ်တံဆိပ်၏ အသိအမှတ်ပြုမှုကို ပျမ်းမျှ 80% တိုးတက်စေသည်။
ထုတ်ကုန်တစ်ခု၏လက်ခံမှု သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်း၏ 60% အတွက် အရောင်အသွေးအမြင်သည် တာဝန်ရှိသည်။
ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုအတွက် အရောင်အစီအစဥ်ကို ဆုံးဖြတ်သည့်အခါ၊ ပါ၀င်သည့် infographic တွင် အသေးစိတ်အဆင့်အချို့ရှိပါသည်။
အဓိကအရောင် - သင့်ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု၏ စွမ်းအင်နှင့် ကိုက်ညီသော အရောင်ကို ရွေးချယ်ပါ။
လှုပ်ရှားမှုအရောင်များ - ၎င်းသည် အောက်ပါ infographic မှလွဲချော်နေသော်လည်း အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်အရောင်နှင့် ဒုတိယလုပ်ဆောင်ချက်အရောင်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည် အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။ ၎င်းသည် အရောင်ကိုအခြေခံ၍ တိကျသောအသုံးပြုသူအင်တာဖေ့စ်ဒြပ်စင်များကိုအာရုံစိုက်ရန် သင့်ပရိသတ်အား ပညာပေးသည်။
Aထပ်လောင်းအရောင်များ - အပိုကိုရွေးချယ်ပါ။ ဖြည့်စွက်သောအရောင်များ သင်၏မူလအရောင်၊ သင်၏မူလအရောင်ကိုဖြစ်စေသော အကောင်းဆုံးအရောင်များ ပေါ့ပ်.
နောက်ခံအရောင်များ – သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်၏ နောက်ခံအတွက် အရောင်ကို ရွေးချယ်ပါ – သင့်မူလအရောင်ထက် ရန်လိုမှုနည်းနိုင်သည်။ အမှောင်နှင့် အလင်းမုဒ်တွင် ထားရှိရန်ကိုလည်း သတိရပါ.. ဆိုဒ်များသည် အလင်း သို့မဟုတ် အမှောင်မုဒ်တွင် အရောင်အသွေးအစီအစဥ်များကို ပိုများလာစေသည်။
စာလုံးပုံစံအရောင်များ – သင့်ဝဘ်ဆိုက်တွင်ရှိမည့် စာသားအတွက် အရောင်ကိုရွေးချယ်ပါ – အစိုင်အခဲအမည်းရောင်စာလုံးပုံစံသည် ရှားပါးပြီး အကြံပြုထားခြင်းမဟုတ်ကြောင်း သတိရပါ။
ဥပမာအနေနဲ့၊ ငါ့ကုမ္ပဏီ Highbridge လူများတတ်နိုင်သော တိုက်ရိုက်-to-စားသုံးသူ ecommerce site ကိုတည်ဆောက်လိုသော ဝတ်စုံထုတ်လုပ်သူအတွက် အွန်လိုင်းအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကို တီထွင်ခဲ့သည် အဝတ်အစားများကိုအွန်လိုင်းမှဝယ်ပါ။. ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ်မှတ်ပရိသတ်၊ အမှတ်တံဆိပ်၏တန်ဖိုးကို ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်ပြီး - အမှတ်တံဆိပ်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်အများစုဖြစ်ပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် - ပုံနှိပ် (CMYK)၊ ထည်ရောင်စုံများ (Pantone) အပါအဝင် အရောင်အသွေးအစီအစဥ်များအပေါ် အာရုံစိုက်ထားပါသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ် (RGB နှင့် Hex)။
စျေးကွက်သုတေသနဖြင့် အရောင်အသွေးအစီအစဉ်ကို စမ်းသပ်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်အစီအစဥ်ရွေးချယ်မှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းစဉ်သည် ပြင်းထန်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အား တစ်ရောင်တည်းသို့ လျှော့ချပေးသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ်မှတ်ပရိသတ်နှင့်အတူ အဓိကအရောင်စီးရီးများအကြောင်း စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသုတေသနပြုခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အရောင်အစီအစဥ်အချို့ကို ကျဉ်းမြောင်းသည့်နေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ်မှတ်ပရိသတ်နှင့်အတူ ဆင့်ပွားနှင့်အဆင့်မြင့်အရောင်များဆိုင်ရာ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသုတေသနပြုခဲ့ပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းပုံသဏ္ဍာန်များ (ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးမှု၊ လည်ပင်းတက်ဂ်များနှင့် တွဲလောင်းတဂ်များ) များအပြင် အရောင်အစီအစဥ်များဖြင့် အီလက်ထရွန်နစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးပုံစံများဖြင့် အတုအယောင်များကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ကို ဖောက်သည်အပြင် တုံ့ပြန်ချက်အတွက် ပစ်မှတ်ပရိသတ်အား ပေးဆောင်ခဲ့ပါသည်။
၎င်းတို့၏အမှတ်တံဆိပ်သည် ရာသီအလိုက် အများစုအပေါ်တွင် မူတည်နေသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ရာသီအလိုက် အရောင်များကို ရောနှောပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် ကြော်ငြာများနှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာမျှဝေမှုများအတွက် သီးခြားစုစည်းမှု သို့မဟုတ် ရုပ်ပုံများအတွက် အသုံးဝင်ပါသည်။
နောက်ဆုံးအစီအစဥ်ကို မဖြေရှင်းခင် ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကို အကြိမ်ပေါင်း တစ်ဒါဇင်ကျော်ကျော် ဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်။
အမှတ်တံဆိပ်အရောင်များသည် ပန်းရောင်ဖျော့ဖျော့နှင့် မီးခိုးရောင်ဖြစ်နေသော်လည်း၊ လုပ်ဆောင်ချက်အရောင်များ အစိမ်းရောင်အရိပ်ဖြစ်ဖို့။ အစိမ်းရောင်သည် လှုပ်ရှားမှုအသားပေးအရောင်ဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများ၏မျက်လုံးများကို အက်ရှင်ဆန်သောဒြပ်စင်များထံ ဆွဲသွင်းရန် ရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုတိယလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် အစိမ်းရောင်၏ပြောင်းပြန်ကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသည် (အဖြူရောင်နောက်ခံနှင့် စာသားပါသော အစိမ်းရောင်ဘောင်)။ လျှပ်စီးလှုပ်ရှားမှုများအတွက် လှုပ်ရှားမှုအရောင်ပေါ်ရှိ အစိမ်းရင့်ရောင်အရိပ်ကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ စမ်းသပ်နေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆိုက်ကို စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ကတည်းက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်သည်များထံ ဆွဲငင်ခံရပြီး အများဆုံးနှင့် အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသော အစိတ်အပိုင်းများကို စောင့်ကြည့်ရန် mouse-tracking နှင့် heatmaps တို့ကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်မဟုတ်ကြောင်း သေချာစေပါသည်။
အရောင်များ၊ White Space နှင့် Element များ၏ လက္ခဏာများ
အသုံးပြုသူများ၏ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကို သတိပြုရန် အလုံးစုံအသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်တွင် စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် အရောင်အစီအစဥ်ကို ရေးဆွဲခြင်းသည် အမြဲတမ်းဖြစ်သင့်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါဆိုက်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလွန်တိကျသောအနားသတ်များ၊ အကွက်များ၊ အကွက်များ၊ နယ်နိမိတ်အချင်းဝက်များ၊ အိုင်ကွန်ရုပ်ပုံနှင့် စာရိုက်ပုံစံများကိုပါ ထည့်သွင်းထားပါသည်။
စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ကုမ္ပဏီအတွင်း၌ ဖြန့်ဖြူးရန် ကုမ္ပဏီအတွက် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု အပြည့်အစုံကို ကျွန်ုပ်တို့ ပေးပို့ထားပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အသစ်ဖြစ်နေပြီး ဤအချိန်တွင် လုပ်ငန်းတွင် အသိတရားမရှိသောကြောင့် အမှတ်တံဆိပ်ညီညွတ်မှုသည် ဤကုမ္ပဏီအတွက် အရေးကြီးပါသည်။
ဤသည်မှာ အရောင်အစီအစဉ်ဖြင့် ရလဒ်ထွက်ရှိသော အီလက်ထရွန်းနစ်ဆိုက်ဖြစ်သည်။
Closet52 စုစည်းမှုများ စာမျက်နှာ
သင့်ဆိုက်၏ဒြပ်စင်များတစ်လျှောက် အရောင်ခြားနားမှုအတွက် အသုံးပြုနိုင်စွမ်းစမ်းသပ်ခြင်းကို မမေ့ပါနှင့်။ သင်သည်သင်၏အစီအစဥ်ကိုစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ ဝဘ်ဆိုက် အသုံးပြုနိုင်စွမ်း စမ်းသပ်ခြင်း ကိရိယာ. ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်အစီအစဥ်ဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဆန့်ကျင်ဘက်ပြဿနာအချို့ရှိနေကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိသည်၊ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများအတွက် ရွေးချယ်စရာအချို့ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ်မှတ်ပရိသတ်နှင့် အရောင်ပြဿနာများ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေမှာ အလွန်နည်းပါးပါသည်။
Color blindness သည် အရောင်မစုံသော သုံးစွဲသူများ ခွဲခြားနိုင်သော အချို့သော အရောင်များအကြား ကွဲပြားမှုများကို ရိပ်မိနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ Color blindness နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိခိုက်ပါတယ်။ အမျိုးသားများရဲ့ ငါးရာခိုင်နှုန်းမှ ရှစ်ရာခိုင်နှုန်း (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 10.5 သန်း) နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ တစ်ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာရှိသည်။
WebsiteBuilderExpert မှအဖွဲ့သည် ဤ infographic နှင့်အသေးစိတ်တွဲပါဆောင်းပါးကိုစုစည်းထားသည်။ သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်အတွက် အရောင်ရွေးချယ်နည်း အလွန်စေ့စပ်သေချာသည်။
Tags: လုပ်ဆောင်ချက်အရောင်များနောက်ခံအရောင်များအမှတ်တံဆိပ်အရောင်များအရေးယူအရောင်ကိုခေါ်ပါဗီရို ၅၂အရောင်အရောင်အစီအစဉ်အရောင်အစီအစဉ်များecommerce အရောင်ecommerce အရောင်အစီအစဥ်အရောင်စမ်းသပ်နည်းစျေးကွက်သုတေသနမိုဘိုင်းအက်ပ်အရောင်အစီအစဥ်အဓိကအရောင်များဒုတိယအရောင်များအရောင်များကိုရွေးပါတတိယအဆင့်အရောင်များအရောင်အစီအစဉ်ကို စမ်းသပ်ခြင်း။အရောင်အစီအစဥ်များကို စမ်းသပ်ခြင်း။စာလုံးအရောင်များအသုံးပြုသူ interface ကိုဒီဇိုင်းweb design မှာက်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်း
Shopify- Liquid ကို အသုံးပြု၍ SEO အတွက် တက်ကြွသော ဆောင်ပုဒ်ခေါင်းစဉ်များနှင့် မက်တာဖော်ပြချက်များအား မည်ကဲ့သို့ အစီအစဉ်ဆွဲမည်နည်း။